प्रेम बानियाँ भन्छन -आत्मह*त्या गरेको मान्छेको भिडियो ‘इडिटेड भर्सन’ मा सार्वजनिक गर्ने कुन प्रहरी अधिकारी हो ? - PanchKhal Online
Home/रोचक/प्रेम बानियाँ भन्छन -आत्मह*त्या गरेको मान्छेको भिडियो ‘इडिटेड भर्सन’ मा सार्वजनिक गर्ने कुन प्रहरी अधिकारी हो ?
प्रेम बानियाँ भन्छन -आत्मह*त्या गरेको मान्छेको भिडियो ‘इडिटेड भर्सन’ मा सार्वजनिक गर्ने कुन प्रहरी अधिकारी हो ?
काठमाडौँ : पत्रकार शालिकराम पुडासैनिले आफुलाई रवि लामिछाने सहित ३ जना आत्मा ह*त्या गर्न वाध्य बनाएको भन्ने भिडियो सार्वजनिक भए पछी प्रहरीले बिहीवार नै तिनै जनालाई प*क्राउ गरेको छ । न्युज २४ टेलि भिजनका पत्रकार रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र नर्स अस्मिता कार्कीलाई पक्राउ बिहीवार नै प*क्राउ गरेको हो । पत्राउ परेका तिनै जनालाई गए राती नै चितवन ल्याईएको छ ।रवि लामिछाने प*क्राउ परेपछी प्रेम बानियाँले यसो भनेका छन् : रबिजी Rabi Lamichhane प्रकरणमा प्रचलित कानुनको सम्मान गर्दै … नम्बर १, आत्मह*त्या गरेको मान्छेको पकेट भित्रको मोबाइलमा रहेको भिडियो ‘इडिटेड भर्सन’ मा सार्वजनिक गर्ने कुन प्रहरी अधिकारी हो ?
उसलाई कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यो त अनुसन्धानको विषय थियो र प्रहरी अधिकारी बाहेक अरु कसैले यो सार्वजनिक गर्नै सक्दैन/मिल्दैन !यदि अपराध पुष्टि भयो भने मात्रै प्रहरीले यसलाई सार्वजनिक गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन किन भुलियो ? कुल २३ मिनेटको भनिएकाे भिडियोमा खोई बाँकी भिडियो ? अरु पनि त आरोपित हुनसक्छन् ? नम्बर २, भोलि, कोही कसैले कथम्कदाचित, प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड वा देउवाका नाममा तिम्रा कारण मैले आत्मह*त्या गरेको हूँ भनेर पासो लगायो भने उहाँहरु जेल जानुपर्छ कि पर्दैन ?